Syria19 Desambra 2011
Ejipta18 Desambra 2011
Iràna16 Desambra 2011
Libia15 Desambra 2011
Nanao fihetsiketsehana tao an-drenivohitra Tripoli ny Libyana androany, ho fanoherana ny fampiasana fitaovam-piadiana, tao amin'ilay kianja malaza antsoina hoe kianjan'ny Martiora, kianja Maitso teo aloha, no nanaovana ny hetsika. Mpisera Twitter maro no tonga tao mba hampita mivantana ny hetsika nomena anarana hoe #BodoyTripoli. Soram-baventy nandritra ny hetsika...
Palestina: Matory Ary Fohazin'ny Fipoahana Ny Ao Gaza
Palestina14 Desambra 2011
Ny fahanginan'izao tontolo izao amin'ny fanafihana tsy an-kiato an'i Gaza dia nahatonga hatezerana mafy tamin'ireo mpampiasa aterineto ao amin'ny Twitter, izay niampanga fa tsy mijery ireo Palestiniana ho toy ny olombelona intsony izao tontolo izao. Ireo fihetseham-po ireo dia taorian'ireo vaovao momba ny nanafihan'i Israely ny Lemak'i Gaza tamin'ity maraina...
Syria13 Desambra 2011
Etazonia12 Desambra 2011
Vahoaka "noforomporonina" ny Palestiniana, izay te-hamotika an'i Israely, hoy ny mpirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena Amerikana Newt Gingrich. Ny fanamarihany, tao anaty tafatafa niarahana tamin'ny fantsom-pahitalavitra Jiosy, dia niteraka hatezerana sy rikoriko teo amin'ireo mpiondana aterineto manerana ny tontolo Arabo.
Ejipta12 Desambra 2011
Androany no anamarihana ny fahazato taonan'ilay Ejiptiana nahazo Loka Nobel sy sangany tamin'ny fanoratana bokin-tantara, Naguib Mahfouz. Tsarovana ao amin'ny Twitter izany vanim-potoana izany.
Bahrain11 Desambra 2011